ဟာသ – The Padaythar
[Zawgyi] ကျွန်တော်တို့အားလုံး အလုပ်မှာလူတိုင်းဆိုသလို အမှားတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ ကြုံဖူးကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါကလည်း လူသားတွေရဲ့ စရိုက်တစ်ခုပဲမဟုတ်လား။ အမှားလုပ်မိရုံနဲ့ စိတ်အားငယ်တာ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေကတော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒီလိုမဖြစ်ပါနဲ့ လူတိုင်းမှားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ မှားရိုးမှားရုံတင်မကဘူး ဆုပါပေးရလောက်အောင် ပြောင်မြောက်လှပါတယ်။ သူတို့အစွမ်းအစတွေ ပဒေသာ ပရိသတ်ကြီးမြင်ရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အရပ်ရှည်သူများသီးသန့်
ဂိမ်း တီထွင်မှု ဓလေ့ရိုးရာ ဗဟုသုတ လူမှုဘဝ ဟာသ ခေတ်ရေစီး
ဂိမ်းထဲကဇာတ်ကောင်နဲ့ လက်ထပ်တဲ့ ဂျပန်အမျိုးသား
[Zawgyi] အချစ်မှာ ခြားနားချက်တွေ ကန့်သတ်ချက်တွေမရှိဘူးလို့ အများကဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီဒဿနဟာ အခုလို Anime Character နဲ့လက်ထပ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ သွေးထွက်အောင်မှန်ပါတယ်။ LAD Bible ရဲ့ပြောပြချက်အရ Niizuma Lovely x Cation ဆိုတဲ့ VR ဂိမ်း တစ်မျိုးကြောင့် ဒီလိုကိစ္စတွေ ခေတ်စားလာ
ကိုးကားဖော်ပြချက်များ ဗဟုသုတ ဟာသ
November 17, 2018 by padaythar
[Zawgyi] ဒါကျွန်တော်တို့တွေ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြေရခက်နေတဲ့ စကားထာပါ။ ကြက်ဥကပဲ ကြက်မ ပေါက်လာတာလား? ဒါမှမဟုတ် ကြက်မ ဥလိုက်လို့ပဲ ကြက်ဥဖြစ်လာတာလား? တော်တော်လည်း ချာချာလည်ခဲ့တဲ့မေးခွန်းပါပဲ။ ဘာ့ကြောင့်တုန်းဆိုတော့ ကြက်ဥရဖို့ ကြက်မကအရင်ဥမှဖြစ်မှာ ပြီးတော့ကြက်ဆိုတဲ့အမျိုးကလည်း အဲဒီဥကပဲ စပေါက်တာကိုး။ ဒီမှာတင် တဝဲဝဲလည်ပြီး ဘယ်လိုစရှင်းရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။
ကား ဗဟုသုတ ဟာသ
ကမ္ဘာ့ရုပ်အဆိုးဆုံးကား ၁၅ စီး
[Zawgyi] အလှဆိုတာ ရှုစားသူရဲ့ မျက်စိအစုံကို ဖမ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုပေမဲ့လည်း ဘီယာအလုံး၅၀လောက် သောက်ပြီးတာတောင် ဘယ်လိုမှ ကြည့်မလှတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကားတွေမှာလည်း အဲဒီသဘော အတိုင်းပါပဲ။ ခေတ်အဆက်ဆက် ဆိုသလို လမ်းမတွေပေါ်မှာ သူ့ဒီဇိုင်နာကလွဲပြီး ကျန်တဲ့လူ ဘယ်သူမှ လှတယ်လို့ မပြောတဲ့ ကားမျိုးတွေ တွေ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဟာသ အထွေထွေနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ ခေတ်ရေစီး ဗေဒင်
[Zawgyi] အင်္ဂဝိဇ္ဇာ နဲ့ လက္ခဏာပညာတွေဆိုတာ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကတည်းက ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တာပါ။ သင့်ခြေဖဝါးပုံစံနဲ့ အနေအထားကိုကြည့်ပြီး သင့်စိတ်ကိုခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုရော သင်သိပါသလား? ဟုတ်ကဲ့ တကယ်ပြောနေတာပါ။ သင့်ခြေဖဝါးရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန် အရွယ်အစားနဲ့ အနေအထားကိုကြည့်ပြီး သင့်အကြောင်းတွေ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ သင့်ခြေမကိုခုပဲ ငုံ့ကြည့်လိုက်ပါ ခြေညှိုးထက်ရှည်နေလား တိုနေလား ဒါမှမဟုတ် ကြက်ခြေခတ်ဖြစ်နေလား
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ သိပ္ပံနည်းပညာနှင့်ဗဟုသုတ ဟာသ
September 20, 2018 by padaythar
နို့တိုက်သတ္တဝါတွေရဲ့ ဖိုလိင်အင်္ဂါအရိုး(လိင်တံအရိုး)အရွယ်အစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် ကြောက်မက်ဖွယ် ၈ပေ လောက်ရှိတဲ့ ဝေလငါးပြာရဲ့ ဖိုအင်္ဂါအရိုးကနေ ၁.၂၅ လက်မလောက်သာရှိတဲ့ ကြွက်ကတိုး ဖိုအင်္ဂါအရိုးထိ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြားနားကြပါတယ်။ လူသားတွေကတော့ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ လမ်းတစ်နေရာမှာ အဲဒီအရိုးပျောက်ကျကျန်ခဲ့ပါတယ်။ မျိုးပွားမှုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးပြောရရင်တော့ အရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဌာန်က အရေးပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးပြောထားချင်တာကတော့
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း သတင်း ဟာသ
တောင်ကြီးမြို့ အေးသာယာမှာ ထီဆိုင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ကြာစိ
[Zawgyi] ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် နိုင်ငံကျော် လူရွှင်တော် ကြာစိဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ပီပြင်သလို သူတို့ရဲ့ 5Star အဖွဲ့လေးကလည်း ပရိသတ်အားပေးမှုတွေအများဆုံး ရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြာစိက အနုပညာကိုကြိုးစားလုပ်ရင်း သူ့ရဲ့မိသားစုလေးကို လုပ်ကိုင်ကျွှေးမွေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခာမှာတော့ ကြာစိက
ဗဟုသုတ လူမှုဘဝ ဟာသ နိုင်ငံတကာ
September 10, 2018 by padaythar
တလောကတော့ ခွေးလိုနေတဲ့လူသားအကြောင်း ကြားလိုက်မိကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုတစ်ခါ ဆိတ်လိုနေတဲ့ လူသား ထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်ပါပြီ။ Thomas Thwaites ဆိုတဲ့ဗြိတိသျှ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ လန်ဒန်မြို့ရဲ့ မွန်းကျပ်မှုတွေထဲက ရုန်းထွက်ပြီး ဆိတ်တစ်ကောင်လို သုံးရက်လောက်နေကြည့်မယ်လို့ အကြံရလာပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်မဲ့ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်အလူးအလဲ ကြုံတွေခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့စာရင် တိရစ္ဆာန်ဘဝကမှ သာပါသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် ဗဟုသုတ ဟာသ အလှအပ အနုပညာ
တစ်နှစ်တည်းမွေးတယ်လို့ ဘယ်လိုမှမယုံနိုင်တဲ့ ဆယ်လီတို့ရဲ့အသွင်အပြင်များ
September 5, 2018 by padaythar
[Zawgyi] တစ်နှစ်တည်းမွေးတယ်ဆိုပေမဲ့ တချို့လူတွေက တော်တော်ကွာတာသင်သိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သင်ရင်းနှီးနေတဲ့ ဆယ်လီတွေရဲ့အသက်ကို သင်သိရရင် အံ့သြသွားမှာပါ။ ၁၉နှစ် အမ်မာ ကန္နီ(ဒက်ဘီဂါလဂါ) နှင့် ဂျွန်နီဒပ်၏ သမီး လီလီရို့စ် မယ်လိုဒီ ဒပ် ၂၁နှစ် မေစီ ဝီလီယံ(အာယာ စတာ့ခ်) နှင့်
ပညာရေး ဗဟုသုတ သင်တန်း သတင်း ဟာသ ကျောင်း နိုင်ငံတကာ
သူငယ်တန်းကျောင်းဖွင့်ပွဲမှာ တိုင်ဖက်အကနဲ့ဖျော်ဖြေလို့ မိဘများသြချရ
[Zawgyi] တရုတ်နိုင်ငံက သူငယ်တန်းကျောင်းတစ်ခု မိတ်ဆက်ကြိုဆိုပွဲတွင် တိုင်ဖက်ကချေသည်ဖြင့် ဖျော်ဖြေသည့် အကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သတင်းများအရ တောင်ပိုင်း ရှန်ကျန်းမြို့တွင် ချင်းရှားဝေ သူငယ်တန်းကျောင်းဖွင့်ပွဲအတွက် မိဘများနှင့် ကလေးများကို ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ဤတွင်အခမ်းအနားအစီအစဉ် တစ်ရပ်အနေနှင့် မလုံ့တလုံ အဝတ်များ ဝတ်ထားသည့် တိုင်ဖက်ကခြေသည်များကို ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ ယင်းဖျော်ဖြေမှု